Star Awards ရုပ်ရှင်ဆု ပထမဆုံး ခြေလှမ်း ရုပ်ရှင်သမိုင်း မှတ်တမ်းဝင်လေပြီ | Popular
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်းက ချီးမြှင့်မယ့် Star Awards ဆုကို လာမယ့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့်နေရာက သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park မှာပါ။ ရုပ်ရှင်အနုပညာ ရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တို့အတွက် ချီး မြှင့်မယ့် Star Awards ဆိုတာ ဘယ် လိုဆုတံဆိပ်မျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုစံချိန်၊ စံနှုန်းတွေနဲ့ ချီးမြှင့်မှာလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှာလဲ၊ စိတ်ဝင်တစားစောင့် ကြည့်ကြမယ့်သူတွေကော ဘယ်လောက် တောင်ရှိလိမ့်မလဲ စသဖြင့် မေးခွန်း တွေကတော့ ဆက်တိုက်၊ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာမှာပါ။ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်း(MJA)ကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်း ထားသလဲဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်း(MJA) ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အသင်း မှတ်ပုံတင် အမှတ်- ၁/ ပြည်တွင်း/ ဝ၆ဝ၉ ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအသင်း (MWJA) ကနေ ခွဲထွက်ပြီးနောက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ဝရက်နေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်းနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာညီလာခံပြု လုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်း( Myanmar Journalist Association- MJA) ကို အောင်မြင် စွာ ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းကို သတင်း စာဆရာကြီး ဦးခင်မောင်လေး(ဖိုး သောကြာ၊ ခေတ်မိုး)၊ ဆရာဦးစိုးသိမ်း (မောင်ဝံသ)၊ ဆရာဦးကိုကို(ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်)၊ ဆရာဦးသီဟစော (သီဟစော)၊ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်း (ဝင်းငြိမ်း)၊ ဆရာဦး မြတ်ခိုင်(မြတ် ခိုင်)တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး အလုပ်အမှုဆောင် ၂၁ဦး၊ ဗဟိုဦးစီးကော်မတီ ၅၅ ဦးနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းအမှုဆောင်သက်တမ်းမှာ ၃ နှစ်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈ -၂ဝ၂၁သက်တမ်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ် ခိုင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းငြိမ်း၊ ဦး ကျော်စွာမင်း၊ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး ဦးသာဇော်၊ တွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူး(၁) ဒေါ်အိအိတင်၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၂) ဦးဇေယျာမြတ် ခိုင်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှူး ဒေါက်တာဇော်သန်း၊ တွဲဖက်နိုင်ငံတ ကာဆက်ဆံရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်ဂျူလိုင်မိုး၊ တွဲဖက် ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်အေးမွန်၊ စာရင်း စစ် ဒေါ်ခင်သန်းနွဲ့၊ တွဲဖက်စာရင်းစစ် ဒေါ်သူဇာနွယ်၊ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးဘဦး၊ တွဲဖက်ပြန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နွေဦးလင်း၊ စည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း၊ တွဲဖက်စည်းရုံးရေး မှူး ဦးသန်းလှိုင်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင် ဦးသိန်းအေး၊ ဦးထွန်းနေစိုး၊ ဦးတင်ဝင်းလှိုင်၊ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး မှူး ဦးအောင်သူရတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၂ ခုမှ အသင်းသားဦးရေ ၁ဝဝဝ ကျော်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။
Star Awards ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ
နိုင်ငံတကာမှာလည်း နိုင်ငံ အသီးသီးရှိ သတင်းစာဆရာများအ နေနဲ့ ဆုများရွေးချယ်ချီးမြှင့်မှုများရှိနေခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ ဆရာအသင်းအနေနဲ့လည်း မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်ရေး၊ ရုပ်ရှင် လောကသားများရဲ့ ထူးချွန်ပြောင် မြောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ Star Awards ဆုများကို ရွေးချယ် ပေးအပ်ရန် ယခုနှစ်မှာ ပထမဦး ဆုံးအနေနဲ့ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရွေးချယ်ရေးအတွက် အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် ၆ဦး၊ ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ၂၁ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အတိုင် ပင်ခံအဖွဲ့ဝင်များမှာ ဦးဝင်းဖေ၊ မလိခဦးစိုးထိုက်အောင်၊ ဦးလူမင်း၊ ဦးလှမြင့်ဆွေ၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း (CEO Paradiso)၊ ဦးဇော်မြင့် (ရီမြင့်ရုပ်ရှင်)တို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင် Star Awards ဆုရွေးချယ်ရေးကော် မတီဝင်းများအနေနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဝင်းငြိမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးဟိန်းလတ်၊ မောင်ယဉ်ကျော်၊ ဦးမြတ်ခိုင်၊ ဒေါက်တာဇော်သန်း၊ ဦးသိန်းအေး၊ မောင်မျိုး၊ ကိုမျိုး (မြန်မာစာ)၊ ညိုသစ်ငယ်၊ ဒေါ်နန်း အိအိဇာ၊ အောင်စိုးသူ၊ တင် မောင်ဆွေ၊ လင်းနိုင်ဦး၊ ဒေါ်နန်း ကလျာဝင်း၊ ဦးမောင်မောင်အေး (အလင်္ကာဝတ်ရည်)၊ ငြိမ်းအေးအိမ်၊ ဦးထင်လင်း၊ ဦးမိုးမင်း၊ ဦးတင်မောင် ဝင်း(CEO Paradiso)၊ ဦးသာဇော် (ပြန်ကြားရေးမှူး)၊ ဦးထွန်းနေစိုး (အတွင်းရေးမှူး) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
”ဒါကတော့ အားပေးတဲ့လူ လည်းရှိတယ်။ အားမပေးချင်တဲ့လူ တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်။ ကျွန်တော် တို့ကတော့ ကမ္ဘာမှာလုပ်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွေမှာ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေက ပေးတဲ့ဆုဆိုတာရှိတယ်။ အထူး သဖြင့် ဟောလီးဝုဒ်မှာဆိုရင် သူတို့ အော်စကာဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဆို တာရှိသလို နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် တွေက စုပေါင်းပြီးပေးတဲ့ဆုဆိုတာလည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ အသင်းကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေး မယ်ဆိုပြီးတော့ စလုပ်ခဲ့တာပေါ့” လို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် Star Awards ဆု ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းကပြောပါတယ်။ ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကလည်း ”ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေများတယ်။ အခက်အခဲ တွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး နားလည်မှုရသွားကြရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဒါကတော့ ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် အခက် အခဲတွေကတော့ ရှိကြမှာပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။
Star Awards ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်း
၂ဝ၁၈ခုနှစ်အတွင်း ရုံတင်ပြသ ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၈၃ကား ထဲကနေ ဆန်ခါတင်ကား ၂ဝကို ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဝင်အဖွဲ့များ ရဲ့ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဆုအမျိုး အစား ၁၅ဆုကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
”ကျွန်တော်တို့က စာနယ်ဇင်း ဆရာတွေ ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီအထဲမှာ ဂီတနဲ့ ပတ်သက် ရင် ဂီတနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာ ရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပေ့ါနော်။ သီးခြားဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ စာနယ်ဇင်းရှုထောင့်က ပေးတာပါ။ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်ရှုထောင့်ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူး” လို့ ဆရာဦးမြတ်ခိုင် ကပြောပါတယ်။ ဇာတ်ကား ၈၃ကား မှာ မဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကို တချို့ မပါ ချင်လို့ ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေ၊ သူတို့ ဇာတ် ကားတွေကို ဝင်ရောက်အရွေး ချယ်မခံတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်၊ မဟုတ်မေးဖြစ်တော့ . . .
”ကျွန်တော်တို့ ဖယ်ပစ်ပြီး နောက်ကားတွေရွေးတာပေါ့။ ကျွန် တော့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောသ လိုပေါ့။ အဲဒီကားတွေ ဖယ်ပေး လိုက်တော့ ငါတို့ကားတွေရှေ့ တက် လာတာပေါ့ကွာဆိုပြီး သူက ရယ် စရာပြောပါတယ်။ ဒီသဘောပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်မှုလွဲနေကြ လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” လို့ ဆရာ ဦးမြတ် ခိုင်က ပြောပြပါတယ်။
ဆုအမျိုးအစားအလိုက်ဆု ကြေးမှာ ဆုတစ်ဆုကို ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမှာဆိုတော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်တဲ့သ ဘောမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။
”ပေးအပ်မယ့် ၁၅ဆုကတော့ Star Awards ဆုရွေးချယ်ရေး ကနေပြီး သတ်မှတ်တာပါ။ ကျွန်မတိှု့Stellar Seven ကနေ သတ်မှတ်တာ ကကျတော့ Stellar Seven အနေနဲ့ ပေးမယ့် ဆု ၃ဆု ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ကကျတော့ တက်ရောက်လာမယ့် အနုပညာရှင်တွေထဲက Best Dress အမျိုးသားတစ်ဦး၊ အမျိုး သမီးတစ်ဦးရွေးချယ်မယ်။ ပြီးတော့ Best Dress Guest တစ်ဦး ရွေးချယ်ပါမယ်။ ဒီဆု ၃ဆုကတော့ Stellar Seven ကနေ စီစဉ်ရွေး ချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ Star Awards ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို Organizer အဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ့် Stellar Seven Entertainment မှ Operation Director ဒေါ်လင်း ဝတ်မှုန်က ပြောပါတယ်။
အကယ်ဒမီလို့လူအများသိကြ တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာဆိုရင် ပွဲတက်ဝတ်စုံကို မြန်မာဆန် ဆန်ဝတ်စုံတွေနဲ့ ပွဲတက်ရတယ်။ Star Awards ဆုပေးပွဲမှာကော ဘယ်လိုဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပွဲတက် လာမှာလဲ။ ဒါလည်း စိတ်ဝင်စား စရာပါ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းက . . .
”ကျွန်တော်တို့က အဲဒီလိုမျိုး တိုက်ပုံဝတ်ပါတို့၊ အမျိုးသမီးများ ပုဝါခြုံပါတို့ မပြောပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့က Free Style ပဲလုပ်မှာပါ။ ပျော် ပျော်ပါးပါးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲလုပ် မှာပါ” လို့ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း က ချီးမြှင့်မယ့် Star Awards ရုပ်ရှင် ဆု ပထမဆုံးခြေလှမ်းက မြန်မာ့ရုပ် ရှင်သက်တမ်း ၉၈နှစ်အတွင်းမှာ Star Awards ရုပ်ရှင်ဆု ရုပ်ရှင် သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်လေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။